फाइभ स्टारको जस्तै खाना मात्र ३५० मा ? कसरी भयो सम्भव ? हेर्नुहोस् यो भिडियो – Gazabkonews
फाइभ स्टारको जस्तै खाना मात्र ३५० मा ? कसरी भयो सम्भव ? हेर्नुहोस् यो भिडियो
काठमाडौँ । अहिले हरेक चिजको मुल्यले आकाश छोईरहेको छ । जे किन्न पनि महंगो भएका कारण मानिसहरु महंगिले आक्रानत भएको बेला काठमाडौंमै शान्ता बातावरणमा यती धेरै भेराईटिको खाना खाने ठाउँ भेट्दा जो कोही आकर्शित हुने गर्छ ।
काठमाडौंको बौध स्ठित उत्पला क्याफेमा मात्रा ३५० मा झन्डै २० वटा भन्दा बढी भेराईटिको खाना खान सकिन्छ । जहाँ शाहत बातावरण संगै आफुले सोछे भन्दा मिठो र फरक स्वादको खाना क्घान चाहनुहुन्छ भने उत्पला क्याफे लाई सम्झना सक्नुहुनेछ । त्याहाको बिशेशता के छ त रु आउनुस् हेरौ भिडियो
भुवन केसी काण्डमा बढी बकबक गरेको भन्दै प्रेमीले छोडिदिए साम्राज्ञीलाई, फिल्म नै नपाएका बेला लाग्यो कडा झड्का
काठमाडौं । युवा पुस्ताले निकै रुचाएकी नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह २ वर्षदेखि देवांश राणासँग प्रेममा थिइन् । अहिले उनीहरुको सम्बन्ध टुटेको छ ।
उनीहरु त्यसपछि कयौं कार्यक्रमहरुमा पनि सँगै देखिएको यो जोडीको विवाह हुने चर्चा समेत सुरु भएको थियो । प्रेममा रहँदा साम्राज्ञी र देवांशले एक म्युजिक भिडियोमा सँगै अभिनय समेत गरे । जुन गीत साम्राज्ञीकी आमाले गाएकी थिइन् । यी दुईबीचको प्रेम सम्बन्ध टुटेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।
रमेश प्रसाईकी पत्निको आँखाको शल्यक्रिया हुँदै, आर्शिवाद दिनुहोस् रमेश र नन्दालाई, शल्यक्रिया गर्ने तयारीपछि यसरी खुशी ब्यक्त गरिन् नन्दाले, रमेश पनि दंग, हेर्नुहोस् भिडियो